တကယ်ရှိတယ်.တကယ်ဖြစ်သွားပါပြီ….Fbကြောင့် မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း (ဖြစ်ရပ်မှန် ) – ရှအေလငျး
သူတို့မိသားစုဘဝထဲကို ဝင်ရောက်ဖျက်စီးသွားတဲ့အရာတခုက Fbမှာပါတဲ့ messengerလေးတခု ဆိုရင် မမှားပါဘူး..
ဒီနေ့ခေတ် Online အသုံးပြုသူ တချို့ဟာFbဆိုတဲ့ စိတ်ကွယ်ရာ အရပ်ကနေ အိမ်ထောင်ရှိတာ မရှိတာ နားမလည်ကြပဲ ဒု သ န သောဆိုတဲ့ အပြစ်ကို လူမသိ သူမသိ တချို့တွေ ကျူးလွန် နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့် သူငယ်ချင်းအကြောင်းဆက်ရအောင် သူ့နာမည် ကျော်မြင့်သူတို့မိသားစုက ဝန်ထမ်းတွေပါ သမီးလေးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ သူ့မိန်းမ Fb သုံးရင်းနဲ့ ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ စပြီး ခင်ပါတယ် အစကတော့ ရိုးရိုးသားသားပါ ” မင်္ဂလာပါ နေကောင်းလား ” စသည်ဖြင့်ပေါ့..
ကျနော့်သူငယ်ချင်းကလည်းသူတို့ ရိုးရိုးသားပဲဆိုတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်တယ် ဘာမှလည်းးထွေထွေထူးထူးပြောမနေတော့ဘူး..
နောက်ပိုင်းကြတော့ တနေ့ထက်တနေ့ အဲဒီလူနဲ့ အမြဲတမ်း စကားတွေ ပြောနေကြတာ သူတွေ့လာတယ် တခါတလေ Free call တွေ ခေါ်ရင် သူ့ မိန်းမက နောက်ဖေးကို သွားပီး ပြောတာများတယ်။
အဲဒီ အချိန်ထိ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ဘာမှမပြောသေးဘူးနားလည်ပေးလိုက်တယ်။သူ့မိန်မးက ခလေးကို ကျောင်းကြိုရမယ့် ဝတ္တရားတွေလည်း ပျက်လာတယ် ဖုန်းနဲ့မျက်နှာလည်း မခွာတော့ဘူးးဖြစ်လာတယ်။
တခါတော့ သူ့မိန်းမ ထမင်းချက်နေတုန်း ဖုန်းကို ယူကြည့်မိလိုက်တော့ သူတို့ ပို့ ထားတဲ့ စာတွေကို တွေ့လိုက်ရတော့ ကျနော့် သူငယ်ချင်း သူ့မိန်းမကို သွားပီးဆူတယ် ပြောတယ်။
သူ့မိန်းမက ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ ဘာဖြစ်လဲ တဲ့ လိုင်းမှာဆိုတော့ တကယ် မဟုတ်ဘူးတဲ့ အပျော် စနေကြတာတဲ့….
ကျနော့်သူငယ်ချင်းနားလည်ပေးလိုက်တယ် ၊ဒါပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ဘဝင်မကျဘူး အပျော်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မိန်းမ တခြားသူနဲ့ အဲလို ပြောထားတာတော့ ဘယ်သူက ဘဝင်ကျမှာတုန်းဟုတ်ဘူးလား..
နောက်ပိုင်းသူ့မိန်းမက Fbက ကောင်နဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့ အကြောင်းသူ သိလာတယ် ၊သူ့မိန်းမကို သူရှင်းပြတယ် မိန်းမရယ်တဲ့ မိန်းမမှားတာကို သူ ခွင့်လွှတ်တယ်တဲ့….
နောက် ဆက်ပြီးမမှားပါနဲ့တော့ကွာ တဲ့ ကိုတို့မှာ သမီးလေးလဲ ရှိတယ်လို့ သူ ပြောတယ်။ဒါပေမယ့် ပြောလို့ မရပါဘူးသူ့မိန်းမ ရှေ့ဆက်တိုးတယ်လေ….
တနေ့ကျသူ အလုပ်သွားနေတုန်း Fbက ကောင်နဲ့ ခိုးရာလိုက်ပြေးသွားတယ် ကျနော့်သူငယ်ချင်းသူ့သမီးလေးကိုဖက်ပြီး အရမ်းငိုတယ်လေ သမီး..သမီးအမေ မရှိတော့ဘူး တဲ့ ခလေးက ဘာမှ မသိဘူးပေါ့…၊
ဒါနဲ့ သူ့မိဘဆီကိုအကျိုးအကြောင်း ပြောပြ ခလေးကို ထာခဲ့ လိုက်တယ် ၊အဲ့ဒီအချိန်ကနေ စပြီးကျနော့် သူငယ်ချင်း အလုပ်လည်းမသွားတော့ဘူးအရက်တွေချည်း ဖိသောက်တော့တာပါပဲ။
ကြာတော့ အလုပ်ကလည်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ် သူ့မိန်းမ ကိစ္စနဲ့ပဲ နေ့စဉ် ရက်ဆက် အရက်တွေ သောက် ဒီလိုနေရင်းတစ်လလောက်ရှိတော့ အရက်ကြောင့်ပဲ သူ လူ့လောကကြီးထဲကနေ ထွက်ခွာ သွားခဲ့ရတယ်။
Fbကို လွှဲမှားစွာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ သူတို့ကြောင့် ကြားထဲက အပြစ်မရှိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ပဲလှော်ကြားဆားညပ် မြေစာပင် ဖြစ်ခဲ့ရပီလေ။
ဒါ့ကြောင့် Fb သုံးတဲ့သူတချို့ကို ကျနော် ပြောလိုက်ပါရစေ။Fb ကို လွဲမှားစွာ အသုံးမပြုမိပါစေနဲ့ လို့ ပြောလိုက်ပါရစေ။သူငယ်ချင်းးရေ …အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်….။
သူတို့မိသားစုဘဝထဲကို ဝငျရောကျဖကျြစီးသှားတဲ့အရာတခုက Fbမှာပါတဲ့ messengerလေးတခု ဆိုရငျ မမှားပါဘူး..
ဒီနခေ့တျေ Online အသုံးပွုသူ တခြို့ဟာFbဆိုတဲ့ စိတျကှယျရာ အရပျကနေ အိမျထောငျရှိတာ မရှိတာ နားမလညျကွပဲ ဒု သ န သောဆိုတဲ့ အပွဈကို လူမသိ သူမသိ တခြို့တှေ ကြူးလှနျ နကွေခွငျးဖွဈပါတယျ။
ကနြေျာ့ သူငယျခငျြးအကွောငျးဆကျရအောငျ သူ့နာမညျ ကြျောမွငျ့သူတို့မိသားစုက ဝနျထမျးတှပေါ သမီးလေးတဈယောကျ ရှိပါတယျ။
ဖွဈပုံက ဒီလိုပါ သူ့မိနျးမ Fb သုံးရငျးနဲ့ ယောကျြားလေးတယောကျနဲ့ စပွီး ခငျပါတယျ အစကတော့ ရိုးရိုးသားသားပါ ” မင်ျဂလာပါ နကေောငျးလား ” စသညျဖွငျ့ပေါ့..
ကနြေျာ့သူငယျခငျြးကလညျးသူတို့ ရိုးရိုးသားပဲဆိုတော့ ဒီအတိုငျးပဲ ထားလိုကျတယျ ဘာမှလညျးးထှထှေထေူးထူးပွောမနတေော့ဘူး..
နောကျပိုငျးကွတော့ တနထေ့ကျတနေ့ အဲဒီလူနဲ့ အမွဲတမျး စကားတှေ ပွောနကွေတာ သူတှလေ့ာတယျ တခါတလေ Free call တှေ ချေါရငျ သူ့မိနျးမက နောကျဖေးကို သှားပီး ပွောတာမြားတယျ။
အဲဒီ အခြိနျထိ ကနြေျာ့သူငယျခငျြး ဘာမှမပွောသေးဘူးနားလညျပေးလိုကျတယျ။သူ့မိနျမးက ခလေးကို ကြောငျးကွိုရမယျ့ ဝတ်တရားတှလေညျး ပကျြလာတယျ ဖုနျးနဲ့မကျြနှာလညျး မခှာတော့ဘူးးဖွဈလာတယျ။
တခါတော့ သူ့မိနျးမ ထမငျးခကျြနတေုနျး ဖုနျးကို ယူကွညျ့မိလိုကျတော့ သူတို့ ပို့ထားတဲ့ စာတှကေို တှလေို့ကျရတော့ ကနြေျာ့ သူငယျခငျြး သူ့မိနျးမကို သှားပီးဆူတယျ ပွောတယျ။
သူ့မိနျးမက ဘာပွနျပွောလဲဆိုတော့ ဘာဖွဈလဲ တဲ့ လိုငျးမှာဆိုတော့ တကယျ မဟုတျဘူးတဲ့ အပြျော စနကွေတာတဲ့….
ကနြေျာ့သူငယျခငျြးနားလညျပေးလိုကျတယျ ၊ဒါပမေယျ့ သူ့စိတျထဲမှာတော့ ဘဝငျမကဘြူး အပြျောပဲ ဖွဈဖွဈ စတာပဲ ဖွဈဖွဈ ကိုယျ့မိနျးမ တခွားသူနဲ့ အဲလို ပွောထားတာတော့ ဘယျသူက ဘဝငျကမြှာတုနျးဟုတျဘူးလား..
နောကျပိုငျးသူ့မိနျးမက Fbက ကောငျနဲ့ ခြိနျးတှတေဲ့ အကွောငျးသူ သိလာတယျ ၊သူ့မိနျးမကို သူရှငျးပွတယျ မိနျးမရယျတဲ့ မိနျးမမှားတာကို သူ ခှငျ့လှတျတယျတဲ့….
နောကျ ဆကျပွီးမမှားပါနဲ့တော့ကှာ တဲ့ ကိုတို့မှာ သမီးလေးလဲ ရှိတယျလို့သူ ပွောတယျ။ဒါပမေယျ့ ပွောလို့မရပါဘူးသူ့မိနျးမ ရှဆေ့ကျတိုးတယျလေ….
တနကေ့သြူ အလုပျသှားနတေုနျး Fbက ကောငျနဲ့ ခိုးရာလိုကျပွေးသှားတယျ ကနြေျာ့သူငယျခငျြးသူ့သမီးလေးကိုဖကျပွီး အရမျးငိုတယျလေ သမီး..သမီးအမေ မရှိတော့ဘူး တဲ့ ခလေးက ဘာမှ မသိဘူးပေါ့…၊
ဒါနဲ့ သူ့မိဘဆီကိုအကြိုးအကွောငျး ပွောပွ ခလေးကို ထာခဲ့ လိုကျတယျ ၊အဲ့ဒီအခြိနျကနေ စပွီးကနြေျာ့ သူငယျခငျြး အလုပျလညျးမသှားတော့ဘူးအရကျတှခေညျြး ဖိသောကျတော့တာပါပဲ။
ကွာတော့ အလုပျကလညျးထုတျခံလိုကျရတယျ သူ့မိနျးမ ကိစ်စနဲ့ပဲ နစေ့ဉျ ရကျဆကျ အရကျတှေ သောကျ ဒီလိုနရေငျးတဈလလောကျရှိတော့ အရကျကွောငျ့ပဲ သူ လူ့လောကကွီးထဲကနေ ထှကျခှာ သှားခဲ့ရတယျ။
Fbကို လှဲမှားစှာ အသုံးပွုခဲ့တဲ့ သူတို့ကွောငျ့ ကွားထဲက အပွဈမရှိတဲ့ ကလေးတဈယောကျ ပဲလှျောကွားဆားညပျ မွစောပငျ ဖွဈခဲ့ရပီလေ။
ဒါ့ကွောငျ့ Fb သုံးတဲ့သူတခြို့ကို ကနြျော ပွောလိုကျပါရစေ။Fb ကို လှဲမှားစှာ အသုံးမပွုမိပါစနေဲ့ လို့ပွောလိုကျပါရစေ။သူငယျခငျြးးရေ …အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါသညျ….။
အရာရာဟာ ကောင်းဖို့ ဖြစ်လာတာ
“ကြံရည်စက်ထဲ …. လက်ညှပ်မှု ဖြစ်ပွား”
သူ့တို့ကို… ခြေထောက်နဲ့ကန်တဲ့ ကားပိုင်ရှင်ကို… Suprise လုပ်ပေးလိုက်တဲ့.. ခွေးလေးတွေ
ပျံလွန်တော်မူသွားသော မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော်၏ ရုပ်ကလပ်တော်
ဆင်ဆာကျသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ခီ ၂ ခီ ရဲ့ ထာဝရနှောင်ကြိုးရုပ်ရှင်နဲ့ ဇတ်ကားအတွက်...
“အာဏာသိမ်းဖို့ ကြံတယ်ဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦးကို ကင်ဂျုံးအွန်က...